Ị nwere ike ịtụkwasị obi n'ihe ọmụmụ gbasara mkpụrụ osisi Coca-Cola na-akwado? Kedu ka nnukwu soda si agba n'etiti ahụike na ihu abụọ - Echiche 2022
Ị nwere ike ịtụkwasị obi n'ihe ọmụmụ gbasara mkpụrụ osisi Coca-Cola na-akwado? Kedu ka nnukwu soda si agba n'etiti ahụike na ihu abụọ
Nnukwu soda dị ka ụtaba buru ibu ọhụrụ
Ịchọta Ọkara Obi Ụtọ
Nnyocha e mere n’oge na-adịbeghị anya sitere na Mahadum Leeds gosiri na ụmụ nwanyị na-eri nri na-ahọrọ oroma karịa chọkọletị mgbe ha na-esi ísì oroma tupu oge eruo, n’adịghị ka ndị na-eri nri yiri nke ahụ bụ ndị na-ebu ụzọ na-esi isi chọkọletị. Tinyere ihe ọmụmụ ole na ole metụtara ya, ndị nchọpụta ahụ mechara kwubie na nanị ọnụnọ nke nri dị mma nwere ike inye aka ichetara mmadụ ihe mgbaru ọsọ nri ha n'ozuzu ya, na-akpali ha ime nhọrọ dị mma karị.
Ụlọ ọrụ Coca-Cola kwadoro ọmụmụ ihe a, ụlọ ọrụ mba dị iche iche nke na-enye ihe karịrị ụdị 500 n'ime mba 200, ọtụtụ n'ime ha bụ ihe ọṅụṅụ na-adịghị egbu egbu nke sirop. Naanị nso nso a ka ụlọ ọrụ ahụ tinyegoro n'ime ngwaahịa ndị metụtara ahụike, dịka ịzụrụ 2007 nke Glaceau, ụlọ ọrụ na-ahụ maka imepụta mmiri vitamin. Otú ọ dị, maka ọtụtụ n'ime ụwa, Coca-Cola na-anọchi anya nnukwu azụmahịa na ọnụ ọgụgụ ya, ya mere ọkọlọtọ na-acha uhie uhie na-ebili mgbe ụlọ ọrụ ahụ, na ọtụtụ ndị ọzọ dị ka ya, na-amalite mgbasa ozi na-egosi slim, anya na-egbuke egbuke na-anụ ụtọ ngwaahịa na-enweghị ezigbo. uru bara uru.
N'ezie, omume azụmahịa dị otú ahụ abụghị ihe ọhụrụ. Nnukwu ụtaba na-akwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbasa ozi niile na-adọ ndị na-azụ ahịa aka na ntị maka mmetụta ahụike na-adịghị mma nke iri ụtaba. Ma mgbe nkwekọrịta 1998 na ụda nke ijeri $206 nyere iwu ka nnukwu ụlọ ọrụ ụtaba dị ka Philip Morris ga-akwadorịrị mkpọsa ndị a, a na-echebe ụlọ ọrụ ụtaba na mgbasa ozi na-ekwutọ ha kpọmkwem. Dịka ọmụmaatụ, otu mgbasa ozi gosipụtara emume “Demon Awards” na Hell, ebe onye isi ụtaba na-anabata ihe nrite maka “Ọnwụ Kasị Ọnwụ n'ime otu afọ” ka Adolph Hitler, Joseph Stalin, na ndị otu KKK na-aja ya mma.
Philip Morris megidere mkpọsa mgbasa ozi ndị a, na-arụ ụka na ha mebiri iwu mgbochi mkparị nke mmezi ahụ. American Legacy Foundation, onye mgbasa ozi mgbochi ụtaba kachasị na mba ahụ, zara site na iwepu akara Philip Morris na mgbasa ozi ahụ.
"Kedu ka ị ga-esi mee mkpọsa mgbochi ịse anwụrụ ma ghara ikwutọ ụlọ ọrụ ahụ?" jụrụ David Kessler, onye bụbu onye isi ngalaba na-ahụ maka nri na ọgwụ. "Ọ ga-aka mma ịghara ịnara ego ahụ ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịdọrọ eriri."
Nnukwu ụtaba abụghị naanị otu na-ahụ nhịahụ mmekọrịta ọha na eze a, n'agbanyeghị na ọ bụ ya kacha ewu ewu. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ, gụnyere Coca-Cola na PepsiCo, nke nwere Frito Lay, n'etiti ndị ọzọ, na-agbalịsi ike ịnọgide na-enwe aha ọma na gburugburu ahụike na-adịghị ahụkebe, ma ka na-echekwa ahịa na elu.
Dị ka otu nnyocha si kwuo, nke a adịghị adịcha mfe. Ihe doro anya na mgbasa ozi maka nri nri ụtọ ma ọ bụ nnu nnu bụ echiche na ọrụ ụlọ ọrụ abanyela na ọrụ nkeonwe. Ndị ụlọ ọrụ kwenyere na ha ekwesịghị ịbụ ndị a ga-akwụ ụgwọ maka nhọrọ adịghị mma nke ndị na-azụ ahịa mere, boro Andrew Cheyne, onye na-ede akwụkwọ na onye nchọpụta na Berkeley Media Studies Group na California.
Cheyne katọrọ Big Soda n'otu aka ahụ ndị ọzọ sirila nnukwu ụtaba maka ịkpachara anya na-adọ ndị mmadụ aka ná ntị banyere ihe egwu dị na ụtaba, mkpuchi nke Cheyne na-ezo aka dị ka mgbasa ozi ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe (CSR).
"Ekwesịrị itinye atụmatụ Soda CSR n'ọnọdụ ziri ezi," Cheyne kwuru. "Ha na-eji ha na-adọpụ uche ọha na eze na ndị na-eme iwu na azụmahịa ha bụ isi, nke na-erere ọtụtụ mmadụ ihe ọṅụṅụ sugar na caffeined dị ka o kwere mee."
Ndị na-eme nchọpụta na otu Cheyne gara n'ihu iji were nhụsianya ahụike nke iri ihe ọṅụṅụ na-esi ísì ụtọ tụnyere ise siga, nke American Beverage Association jụrụ kpamkpam.
Akụkọ Cheyne na-ekwu, sị: "Sayensị na-apụta na-eri ahụ shuga, karịsịa ma ọ bụrụ na ejikọtara ya na ihe ndị a ma ama na-eri ahụ nke caffeine a na-achọta n'ọtụtụ ihe ọṅụṅụ na-esi ísì ụtọ," ka akụkọ Cheyne na-ekwu, "kwesịrị ime ka mmadụ mara banyere ihe iyi egwu ahụike ọha na eze nke ngwaahịa ahụ yiri nghọta banyere ịṅụ sịga na-eri ahụ. ngwaahịa, "nke ABA zara na nkwupụta mepere emepe na iwe:
"Enweghị nnọọ ntụnyere n'etiti soda na ụtaba - ọ bụghị n'etiti ngwaahịa anyị, ma ọ bụ anyị azụmahịa omume. Taba na na nke ya onwe ya na-emerụ - ọ bụla ego; anyị ihe ọṅụṅụ na-adịghị. Ha nwere ike na-enwe dị ka akụkụ nke a itule, na-arụsi ọrụ ike na. Ọzọkwa, n'agbanyeghị aro ndị edemede, mmemme ọrụ mmekọrịta ọha na eze abụghị ihe pụrụ iche maka ụlọ ọrụ anyị, a na-amata ha ma nabata ha site n'ịzụ ahịa na-eduga gburugburu ụwa. na-eche echiche banyere isiokwu a."
Ihe na-agbaji feathers nke ndị na-akwado CSR bụ akụkụ nke ABA na-ekwu banyere "ụdị ndụ ziri ezi, na-arụ ọrụ na ahụike." Ọ na-adịkarị obere, ndị na-eme ihe ike na-arụ ụka, na nnukwu ụlọ ọrụ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-agụnye ihe ndị dị otú ahụ dị ka akụkụ nke mgbasa ozi ha - n'adịghị ka ndị na-emepụta biya na mmanya, bụ ndị iwu chọrọ ka ha na-agwa ndị na-azụ ahịa ka ha ṅụọ nke ọma.
Na nke a, nsogbu nke ọrụ ụlọ ọrụ na-aghọ ihe ngosi, nke ụlọ ọrụ Coca-Cola gbalịrị ime ọganihu dị ukwuu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ gbalịsiri ike ịnye nhọrọ calorie efu, yana ịkọwapụta ozi nri dị mkpa maka ndị na-azụ ahịa. Ma ọbụna mgbalị ndị a adịghị abịa na-enweghị esemokwu, dị ka ụfọdụ ndị ọkachamara na-ekwu na ozi na-ama ụma na-eduhie eduhie iji kwalite oriri, na efu-calorie nhọrọ na-ahụ nnọọ obere oge mgbasa ozi karịa aha ụlọ ọrụ dị iche iche.
"Ha na-ekwu na ha ga-enye ozi ihe oriri na-edozi ahụ nke ọma, na-edepụta calorie n'ihu ngwugwu niile, mana ndị na-azụ ahịa na-anọgide na-enwe mgbagwoju anya n'ihi na Coca-Cola na-ekwupụta ihe oriri na-edozi ahụ n'otu oge," Kantha Shelke, onye ọkà mmụta sayensị nri na Corvus Blue kwuru. LLC na ọnụ na-ekwuchitere Institute of Food Technologists, "na ọtụtụ ndị na-eri dum nwere ike, bụ na mberede na-adịghị re-mmechi. Dị otú ahụ a aga adịghị ka doro anya m."
Arụmụka gbasara CSR na-ekewakarị ndị mmadụ n'otu n'ime ogige abụọ. Ma ndị mmadụ kwenyere na Coca-Cola kwesịrị nweere onwe ya imepụta, ịzụ ahịa, na ire ngwaahịa ọ bụla ha họọrọ, na-ahapụ onye ahịa ka ọ mee nhọrọ nkeonwe… ma ọ bụ ndị mmadụ kwenyere na Coca-Cola nwere oke mmekọrịta ọha na eze n'ubu ya. Ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ na-emepụta ngwaahịa; ọ na-ere ahịa nke ukwuu maka ndị na-azụ ahịa na-amaghị ihe, ma hà bụ ụmụaka, ndị buru ibu, ma ọ bụ ndị na-amaghị ihe.
Otu ọkachamara n'ihe banyere nri na-edozi ahụ́ ji nhọrọ onwe onye tụnyere iri nri nke ọma, omume ọtụtụ ndị na-emekarị n'agbanyeghị na ha kwetara na ọ bara uru.
"Ọ bụ nzọụkwụ dị mma maka ndị na-azụ ahịa site n'ịkụziri ha nri dị mma. Soda bụ nhọrọ. N'otu aka ahụ mmadụ nwere nhọrọ iri mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, "ka Keri Gans, onye na-eri nri na onye edemede nke The Small Change kwuru. Nri. "Ọ bụghị onye ọ bụla na-eri ha, n'agbanyeghị na anyị maara na ọ dị anyị mma."
E nwekwara ndị dị ka Andrew Cheyne, bụ ndị nọgidere na-enwe obi abụọ banyere nkwa Coca-Cola na ibi ndụ dị mma nwere ike ịgụnye ịṅụ soda ụlọ ọrụ.
"Ọbụna site na nkọwa ndị a dị nkenke," Cheyne dere na akụkọ ya, nke e bipụtara na PLoS One, "ọ na-egosi na mgbasa ozi soda CSR na-eme ka echiche ahụ na-eme ka ndị ahịa 'omume ọjọọ' na-akpata oke ibu, na-atụgharị uche na ntinye aka soda. oke ibu na-arị elu."
Idozi arụmụka banyere Coca-Cola's CSR pụtara ịbanye n'ime ihe mgbochi echiche miri emi n'ihe gbasara otu ụlọ ọrụ si eme azụmahịa. Ma ị na-eche na ụlọ ọrụ ndị dị ka Coca-Cola na PepsiCo nwere ike inwe ezi ebumnuche mgbe ha na-eme mkpọsa mgbasa ozi ha nwere ike na-ekpughe eziokwu buru ibu banyere echiche gị banyere ibu ọrụ nkeonwe. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ha naanị dị ka ụlọ ọrụ na-akpata ego, na-echebara isi na izute ala ala ha, ị ga-ahụ onwe gị ka ị na-ahụ otu mkpọsa ahụ dị ka mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ikekwe otu ihe akụkụ abụọ ahụ nwere ike imebi bụ na a haziri ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ iji nweta ego, naanị ihe dị iche bụ ruo ókè ebumnuche ego na-emetụta omume.
Dị ka onye na-ahụ maka ahịa maka Pepsi's Refresh Project Shiv Singh kwuru n'otu oge, mkpọsa Pepsi na-arụ ọrụ ọha, dị ka iwughachi ogige ntụrụndụ na imepụta nka ọha, abụghị "mgbalị ọrụ enyemaka na-anaghị akwụ ụgwọ nke ọdịnala na anyị na-aga dee akwụkwọ ndenye ego. DNA nke ime na inwe mmetụta dị mma na isi nke mbọ ịzụ ahịa ika."
Mana Cheyne ka kwụsiri ike na nkatọ ya, na-akwado maka mgbanwe mmekọrịta ọha na eze ọbụlagodi na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ kwesịrị ibu oke ụta.
O kwuru, sị: "Ọ bụghị ihe a ga-eme dị ka ihe a na-eme. "Ndị obodo gburugburu obodo ahụ na-eche banyere mmanya na-egbu egbu, ma na-amalite ime ihe iji chebe onwe ha pụọ ​​​​na ngwaahịa ndị a na-emerụ ahụ."